ကော်ပိုရိတ်နာရီများ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ကော်ပိုရိတ်နာရီများ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ပုံစံ - Customized corporate gifts
တစ်နှစ် 365 ရက်,ကုမ္ပဏီ၌အတူတကွအလုပ်လုပ်သောမိတ်ဖက်ရှိပါတယ်,နှင့်ပြင်ပဖောက်သည်များနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိသည်.မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၏နေ့ရက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ပိုမိုရှိသည်.
ID.နင့်နာမည်ကိုညွှန်းပေးတဲ့အချိန်မှာအတူတူထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.သင်၏ပါဝင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်.အဆိုပါကုမ္ပဏီလက်ပတ်နာရီရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြသနေသည်.ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကို ဦး ဆောင်နေလို့ပဲ,ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ပတ်နာရီ၏နောက်ကျောဖုံးတွင်ရေးသားခဲ့သည်.အများအားဖြင့်ပြောခဲသောရိုးသားမှုကိုနာရီ၏အောက်ခြေတွင်ဖုံးကွယ်ထားသည်.
စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်/Custom Watch Dials/နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချစ်မြတ်နိုးရန်,အရေးအကြီးဆုံးအရာက ၀ န်ထမ်းတွေကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ပါ.
သင်၏ ၅ နှစ်မြောက်မိတ်ဖက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
”ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ ၀ န်ထမ်းများသည်ရှည်လျားလာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်-ကုမ္ပဏီ၏သူငယ်ချင်းကောင်း!”
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/corporate-watches.html
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwan, Xing Heart Enterprise Partnership ပြီးပြည့်စုံစက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှု, အမှီအခိုကင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသန, စျေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည် ကော်ပိုရိတ်နာရီများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအခြားရွေးချယ်စရာ application များအတွက်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ. ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
စုစုပေါင်းဖောက်သည် ?? ့စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အာမခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစတင်လုပ်ဆောင်စေသည်။
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပစ္စည်းများ Watch မျက်နှာပြင်အချင်း(စားပွဲဘောင်၏အပြင်ဘက်အချင်း):၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/၇.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား(width):၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု မျက်နှာပြင်:နီလာမှန် ရေစိမ်ခံသော:3ATM(မီတာ ၃၀)ဘဝရေစိုခံ
အကောင်းဆုံး ကော်ပိုရိတ်နာရီများ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ်နာရီများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
နိဒါန်း:ID ကိုသင်ထောက်ခံသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.နာရီ.ဤထုတ်ကုန်သည်သီးသန့်ဖောက်သည်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းမှပိုင်ဆိုင်သည်.ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အချိန် 10-၁၅ ရက်(6 ရက်မပါဝင်ပါဘူး),နှင့်အချို့သောစိတ်ကြိုက်စီမံကိန်းများကိုရက်ပေါင်း 30 ရှိပါတယ်.ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ(ID.စောင့်ကြည့်),သင်အတည်ပြုပြီးနောက်အမိန့်ကိုထူထောင်သည်,အီးအညီအမိန့်အတည်ပြုချက်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါ-အမိန့်စာမျက်နှာဖြည့်ပါ mail လိပ်စာ,ကျေးဇူးပြုပြီးအီးကိုအာရုံစိုက်ပါ-MAIL သတင်းစကား,နောက်ဆက်တွဲအမိန့်များ၏ content နောက်ဆုံးပေါ်အီးအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည်-MAIL အတည်ပြုချက်သတင်းအချက်အလက်. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအာမခံချက်:ID.ထုတ်ကုန်တစ်ခုတစ်ခုပေးစောင့်ကြည့်ပါ-ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ။ တစ်နှစ်အာမခံ.အဆိုပါအကြောင်းအရာပုံမှန်မဟုတ်သောထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်(လှုပ်ရှားမှု,ပရိသစစ်ဆင်ရေး),အခမဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်သည်.ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမပြုမီ,အခြားအစိတ်အပိုင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်တာဝန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး.7 ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.7 ရက်ပြီးနောက်,သင်ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်းကိုလက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်,သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုသီးခြားစီမပြုလုပ်ပါ”အလကား” ,ဒါပေမယ့်သင်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီသင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်သည်.ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်မည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရရန် ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အသင်းဝင်နေရာတစ်ခုစီသို့သင်သွားနိုင်သည်. ကြိုတင်ကာကွယ်မှု:ကျနော်တို့အာမခံအကြောင်းအရာပေး,သို့သော်၎င်းသည်အောက်ပါအခြေအနေများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ. ကုန်ပစ္စည်း၏မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြandနာများနှင့်ပျက်စီးခြင်း(ဆူညံသံလိုမျိုး,ပျက်စီးခြင်း,အဓိကခန္ဓာကိုယ်၏ပုံပျက်သော,ထိခိုက်ပျက်စီးမှု,မြဝတီ,စသည်တို့.) မသင့်လျော်သော disassembly နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးမျိုးသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်. သိုလှောင်ရာနေရာများမလျော်ကန်သောနေရာချထားမှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း(ဓာတ်တိုး,အရောင်,စသည်တို့.,သို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အသွင်အပြင်အပြောင်းအလဲများကို-အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုစွတ်သောမှတ်ထိတွေ့မှု) frame မျက်နှာပြင်ခြစ်နေသည်,ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဝတ်ဆင်နှင့်အရောင်ပြောင်း,frame ကိုအရောင်ပြောင်းနှင့်ခါးပတ်ကျိုးပဲ့. ဖြည့်စွက်ကာ,သင်ရရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်,ပေးထားသောအာမခံကဒ်သည်သင့်အားအချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်.ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါ,ကျေးဇူးပြု၍ သင့်နာမည်ပေးပါ,ဖုန်းနံပါတ်,လိပ်စာနှင့်အမိန့်နံပါတ်. ထုတ်ကုန်:အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းသည်သက်တမ်းကုန်သောကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်,လှုပ်ရှားမှုများ,စသည်တို့.,ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ,နှင့်ဝယ်ယူကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကွာခြားချက်စျေးနှုန်းခြားနားချက်လျော်ကြေးငွေ၏အခြေအနေများတွင်မပါဝင်ပါလိမ့်မယ်. တာဝန်ဝတ္တရားများ: ကုန်ပစ္စည်းသည်အာမခံကာလအတွင်းဖြစ်သည်,ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောချို့ယွင်းချက်များအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကုန်တင်ကုန်ချစရိတ်များအခမဲ့ပေးလိမ့်မည်. (အချိန်သည်သင်၏တည်နေရာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်,ကျေးဇူးပြု၍ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ) အာမခံချက်မပါရှိသောအစားထိုးရန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်,သငျသညျအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်. ကုန်ပစ္စည်းများနိုင်ငံတကာတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်ပြန်လာသောလျှင်,က”အခွန်,စားသုံးမှုအခွန်”စသည်တို့.အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများ၏မူဝါဒများအားဖြင့်ထုတ်ပေးကုမ္ပဏီ၏နယ်ပယ်အတွင်းမရှိကြပေ’တာဝန်များ,နှင့်ကုန်ကျစရိတ်စားသုံးသူသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်သယ်ဆောင်ရပါမည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပိုဆောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကမဖုံးထားပါက”သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး”ဝေးလံခေါင်ဖျားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်,ကုန်ကျစရိတ်ကိုစားသုံးသူကကျခံသင့်သည်. နိုင်ငံတကာလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်,နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့တင်ပို့သောထုတ်ကုန်များသည်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများကြောင့်လီသီယမ်ဓာတ်ခဲများမပါ ၀ င်ရပါ.ထို့ကြောင့်,ပြည်ပပို့ကုန်ထုတ်ကုန်အားလုံးဘက်ထရီဖြစ်ကြသည်-အခမဲ့. ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ: သင်တစ် ဦး ID ကိုဝယ်ယူလျှင်.နာရီကြည့်ပါ,ထုတ်ကုန်ပေးပို့စဉ်အတွင်းပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်း.ကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်ယူပြီး ၇ ရက်အတွင်းပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်,ပြီးတော့သင်ကထုတ်ကုန်အသစ်နဲ့တိုက်ရိုက်အစားထိုးနိုင်တယ်. စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်သည်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အခြေခံသည်,နှင့်ပြန်လာကိုလက်ခံကြသည်မဟုတ်နှင့်အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းပေးနေကြသည်. စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များအတွက်အမှာစာများသည်အင်တာနက်မှတဆင့်ကုန်သွယ်လိမ့်မည်,နှင့် 7-စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ တွင်ပြဌာန်းထားသောနေ့ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည်မသက်ရောက်ပါ.